त्यो भयानक घटना !!! इन्जिनियर र ठेकेदारलाई मुद्दा र नोक्सानी असुल्न आदेश !!! « गोर्खाली खबर डटकम
गाजियावादको मुरादनगर श्मशान हादसाको वारे मुख्यमन्त्रि योगी आदित्यनाथले कडा कारवाही गरेको छ । सीएम योगीले घटनाको लागि जिम्मेदार इंजीनियर र ठेकेदारको विरुद्द मुद्दा लगाउनको लागि आदेश दिएको छ । साथै पुरा नोक्साल असुली दोषी इंजिनियर र ठेकेदारलाई कारवाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले डिएम र कमिस्नरको नोटिस जारी गरि सम्पुर्ण नोक्सानी असुलउपर गर्न भनिएको छ । यसको साथै ति मृतकका परिवारलाई १०÷१० लाखको आर्थिक सहायता र आवासहिन परिवारलाई आवासको पनि सुविधा दिन पनि निर्देशन दिईएको छ ।
मुरादानगरको श्मशानमा गए राती भएको हादसाको मुख्य आरोपी अजय त्यागीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । घटना पछि उनि फरार थिए । गाजियावाद पुलिसले आरोपी अजय त्यागीको नाममा २५ हजारको इनाम घोषणा गरेको थियो । घटनामा २५ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । श्मशानघाटमा कमजोर निर्माणका कारण छत भत्केर उक्त व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको थियो । पुलिसले आफ्नो जाँचपदतालमा छत वनाउने ठेकेदार र नगरपालिकाको ईन्जिनियरको लापरवाही भएको जनाएको छ ।
घटना यसरी घटेको थियो
रविवारको मुरादानगरमा श्मशानको छत भत्केर २५ जनाको मृत्यु भएको थियो । उखरलासी गाउँमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएकोले सवै परिवारजन अन्तिम संस्कारको लागि भेला भएको वेला छत खसेर २५ मलामीको मृत्यु भएको थियो ।